Igbo Mass Readings for Monday 6th Week of Easter | Catholic Lectionary
MONDAY: IZU UKA NKE ISII N’OGE MBILITE N’ONWU KRISTI.
Ihe Ogugu nke mbụ – 16:11-15
Ka anyi siri na Troas kworo ugbo ruo Samotres, anyi kworo ugbo echi ya ruo Niapolis. Anyi siri ebe ahu garuo Filipi nke obodo mbu nke ala Masedonia, nke so n’obodo ndi Rom na-achi. Anyi noro n’obodo ahu ubochi olemaole. N’ubochi Sabat anyi puru n’ime obodo, gaa n’akuku osimiri, ebe anyi ghotara na ulo ekpere ndi Juu di: anyi noduru ala gwa umunwaanyi ndi gbakoro ebe ahu okwuchukwu.
Otu n’ime ndi nuru okwu anyi bu nwaanyi a na akpo Lidia, onye obodo Tiatira, onye na-ere akwa na-acha uhie-uhie. Nwaanyi ahu bu onye na efe Chineke. Dinwenu meghere obi ya, ige nti n’ihe niile Pol na-ekwu. Ma mgbe e mechara nwaanyi a na ezinuulo ya mmirichukwu, o rioro ka anyi bja n’ulo ya si: “O buru na unu atuleela, hu na okwukwe m siri ike n’ime Onyenweanyi, bianu n’ulo m biri.” O riosiri anyi ike.
ABUOMA NA AZIZA – Ps: 149: 1-2, 3-4, 5-6, 9.
Kweerenu Onyenweanyi ukwe ohuru, ka ogbako ndi kwere na ya kweere ya ukwe otito. Ka Izrel nurja oñu n’ihi onye kere ya, ka umu Zayon nuria n’ihi onye eze ha. Az./
Ka ha were igba egwu too aha ya, ka ha were igba na ubo akwara gbaara ya egwu. N’ihina Onyenweanyi nwere ihunaanya n’ebe ndi nke ya no, O kpubela ndi umeala okpu nke mmeri. Az/
Ka nnukwu ukwe otito Chineke juputa n’onu ha Iji mejuputa ikpe a mara ha nke a bu otito nke ndi nke ya kwere ekwe. Az./
Akpodoro ya n’elu obe n’ihi anyi, mana ugbu a Dinwenu esila n’ili bilie.
OZIOMA – 15: 26-27. 16: 1-4.
Ihe ogugu ewetara n’Ozioma dị aso nke Jon dere:
Jesu gwara ndi na-eso uzo ya si: Mgbe onye nkasiobi ahu, onye si na Nna m puta, onye bu mmuo nke eziokwu ahu, onye nke m ga-esi na Nna zitere unu ga-abia, O ga-agbakwara m akaebe. Unu onwe unu ga-agbakwa akaebe, n’ihina mu na unu no site na mbu. “Agwala m unu ihe ndia niile ka okwukwe unu ghara ida. Ha ga-achupu unu n’ụlu nzuko ha. N’ezie, oge ga abiakwa mgbe onye obula ga-egbu unu ga-eche na o na-agara Chineke ozi. Ha ga-emekwa ihe ndi a, n’ihi na ha amaghi Nna m, nke ha na-ama m. Ihe ndi a niile ka m na-agwa unu, nke o ga abu mgbe oge ha ruru unu echeta na m gwara unu.